क्यान्सर लागेको ३ दिन भित्र निको हुने यो अचम्मैको जटिबुटी ! सबैको जानकारी को लागि सेयर गरौ..... - hamro Desh
क्यान्सर लागेको ३ दिन भित्र निको हुने यो अचम्मैको जटिबुटी ! सबैको जानकारी को लागि सेयर गरौ…..
सोधमा खटिएका एक जना प्रोफेसर चेन भन्छन्- क्यान्सरलाई ६पीजीडी स्तरमा एक्टिभ गर्नका लागि रुबर्बका प्रयोग गरिनु क्यान्सरलाई ठिक पार्नका लागि जरुरी छ । यसको प्रयोगबाट क्यान्सर ६पीजीडी स्तरमा तीव्र गतिमा बढ्नेछ जसले क्यान्सर चाँडै निको हुनेछ । –
एजेन्सी । क्यान्सरका विरामीमाथि २५ वर्ष लामो सोधपछि क्यालिफोर्निया युनिवर्सिटीको मेडिकल फिजिक्स एवं साइकोलोजीका सिनियर प्रोफेसर डा हर्डिन बी जन्सले भनेका छन्– ‘क्यान्सरको उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने किमोथेरापीले क्यान्सर पीडित विरामीलाई दर्दनाक मृत्युतर्फ धकेल्न सक्छ ।’ तर, क्यान्सरलाई केही घण्टामै ठिक पार्ने थुप्रै औषधिहरु छन् । अंगुरको विउको धुलो (सत्व) हालै भएको एक शोधमा यो कुरा प्रमाणित भएको छ कि अंगुरको विउको धुलो अर्थात सत्व अर्क ल्यूकेमिया र अन्य प्रकारका क्यान्सर ठिक पार्न निकै उपयोगी पाइएको छ । र छोटो समयमै क्यान्सर ठिक पार्न मद्दतगार छ । शोधमा यो कुरा पनि प्रामाणित भइसकेको छ कि अंगुरको विउले मात्र ४८ घण्टामा हरेक किसिमका क्यान्सरलाई ७६ प्रतिशतसम्म विकिर्ण अर्थात ठिक गर्नमा समक्ष छ । अमेरिकन एसोसिएशनको जर्नलमा प्रकाशित एक क्यान्सर रिसर्चका अनुसार अंगुरको विउमा पाइने जेएनके प्रोटिनले क्यान्सर कोशिकाहरुको विकिर्णहरुलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । अब स्वस्थ शरीरका लागि अंगुर मात्रै होइन् यसको विउ पनि खान अमेरिकी चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्– क्यान्सरको उपचारमा अंगुरको विउ सबैभन्दा प्रभावकारी घरेलु औषधि हो । रुबर्ब (फल)को पौधा (पात र डाठ) रुबर्ब पौधा जसलाई रेवतचीनी र रेवन्दचीनीको नामबाट चिनिन्छ । यो पौधालाई आयुर्वेदिक औषधिमा प्रयोग गरिन्छ । यो पौधाको पात विषालु हुन्छ तर, यसको डाठलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
अमेरिकामा भएको एक सोधका अनुसार रुबर्ब पौधाको डाठलाई क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिएको थियो जसले चामत्कारिक परिणाम दियो । वैज्ञानिकहरुले यो पौधाको डाठबाट अबको एक वर्षभित्र क्यान्सरको औषधि बनाउने दाबी गरेका छन् । यो पौधाको डाठमा एक खास अरेञ्ज पिगमेन्ट पाइन्छ । जसले शरीरभित्र रहेका क्यान्सरका सेल्स (कोशिका)हरुलाई ४८ घण्टामा मार्न सक्ने ताकत राख्छ । शोधमा यो डाठ प्रयोग गर्दा दुई दिनमै लयूकैमियाका आधाभन्दा बढी सेल्स (कोशिका)लाई नष्ट गरिसकेको थियो । जर्जियाको विनशिप क्यान्सर इन्सिच्युट र एमोरी युनिवर्सिटीद्धारा २००० मानिसमा यसको परीक्षण गरिएको थियो । जसमा वैज्ञानिकहरुले पारिटिन पाए ।
जो एन्टी–क्यान्सर अर्थात क्यान्सरविरुद्धको ड्रग (औषधि)का रुपमा चिनिन्छ । सोधमा मुसाहरुमाथि ११ दिनसम्म पारिटिनको प्रयोग गर्दा यो फोक्सोको क्यान्सरका लागि उपयोगी औषधि हो भन्ने प्रमाणित भएको थियो । यसका साथै यसले ब्रेन अर्थात मस्तिष्क र गलाको ट्युमरलाई पनि ठिक पार्न सक्छ । सोधकर्ता टिम भन्छ– यो पौधा (जसलाई एक प्रकारको फल पनि भन्छन्) को आधारमा क्यान्सर ठिक पार्नका लागि नयाँ औषधि बनाउनमा सहयोग मिल्नेछ । यसको परिणाम किमोथेरापी जस्तै अर्काे वर्ष आउनेछ । विशेषज्ञ भन्छन्- पारिटिनको प्रयोग किटाणु रोक्नका लागि प्रयोग गरिसकिएको छ तर, औषधिका रुपमा यसको प्रयोग यसै अध्ययनपछि गरिनेछ । सोधमा खटिएका एक जना प्रोफेसर चेन भन्छन्- क्यान्सरलाई ६पीजीडी स्तरमा एक्टिभ गर्नका लागि रुबर्बका प्रयोग गरिनु क्यान्सरलाई ठिक पार्नका लागि जरुरी छ । यसको प्रयोगबाट क्यान्सर ६पीजीडी स्तरमा तीव्र गतिमा बढ्नेछ जसले क्यान्सर चाँडै निको हुनेछ । – (यो शोध जर्नल नेचर सेल बायोलोजीमा प्रकाशित भएको छ ।)